Fahagagana ity: Apple mampihena ny vidin'ny iPad | Vaovao IPhone
Toy ny fitsipika ankapobeny, Apple dia mandefa ireo fitaovany iOS miaraka amin'ny vidiny izay tsy ahena raha tsy herintaona taty aoriana na mandra-pahatongan'ny fanolorany vaovao farany. Milaza aho fa fitsipika ankapobeny satria omaly dia nanao hetsika hafahafa ry zareo, na dia tsy ho hafahafa aza raha raisinay fa tsy avy amin'ny dingana mahazatra ny avy ao Cupertino: ny sasany amin'ireo kinova iPad range dia nahita ny fihenan'ny vidin'izy ireo, raha ny hafa kosa lasa tsy misy amin'ny fahafaha-mitahiry sasany.
Ny antony dia tsy mazava tsara, indrindra raha raisintsika ny fiheveran'ny besinimaro fa ny iPads vaovao dia halefa indray amin'ny lohataona fa tsy amin'ny volana oktobra satria natolotra sy natomboka tamin'ny taona lasa. Na ahoana na ahoana, amin'ny soavaly fanomezana dia tsy tokony hijery ny nifiny isika ary, raha mieritreritra ny hividy iPad ianao, mendrika ny mandeha any amin'ny faritra iPad an'ny Apple Store ary zahao ny vidiny vaovao.
1 Ny vidin'ny IPad
1.1 Ny vidin'ny iPad Pro 9.7-inch teo aloha
1.2 Ny vidin'ny iPad Pro 12.7-inch teo aloha
1.3 Vidiny vaovao ho an'ny elanelan'ny iPad
Ny vidin'ny IPad
Alohan'ny hanombohantsika amin'ny vidiny vaovao dia tsy maintsy tadidintsika ny sasany ny taloha:
Ny vidin'ny iPad Pro 9.7-inch teo aloha
Wi-Fi 128GB: 859 €
Wi-Fi 256GB: 1.039 €
Wi-Fi 128GB + finday: 1.009 €
Wi-Fi 256GB + finday: 1.189 €
Ny vidin'ny iPad Pro 12.7-inch teo aloha
WiFi 32GB: 899 €
WiFi 128GB: 1079 €
WiFi 128GB + finday: 1229 €
Vidiny vaovao ho an'ny elanelan'ny iPad
Ary ho toy izao ny vidiny vaovao:
WiFi 32GB 899 € 679 € 429 € 429 € 289 €
WiFi 128GB 1.009 € 789 € 539 € 539 € -
WiFi 256GB 1.119 € 899 € - - -
WiFi + Cellular 32GB - 829 € 549 € 549 € 409 €
WiFi + Cellular 128GB 1.159 € 939 € 659 € 659 € -
WiFi + Cellular 256GB 1.269 1.049 € - - -
Araka ny hitanao dia zava-dehibe ny fihenam-bidy, zavatra iray izay tsikaritra indrindra amin'ny maodely lafo kokoa an'ny iPad Pro. Ohatra, ny 9.7GB 256-inch iPad Pro dia nidina hatramin'ny € 1.189 ka hatramin'ny 1.049 €, izay fahasamihafana 140 €, raha mbola tsy nitifitra aho tamin'ny fotoana iray tamin'ny fampitahana. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, raha te hividy iPad ianao dia mety ho fotoana mety izao. Inona no mahaliana anao aorian'ny fivarotana be ranony?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fahagagana ity: mampihena ny vidin'ny elanelana iPad ny Apple
1189-1049 = € 140 + € 10 ho an'ny mpanoratra ny lahatsoratra.
Rafael Bobadilla dia hoy izy:
Fa maninona no nofafanao ny hevitro? Tsy misy fanehoan-kevitra malalaka ve ???
Valiny tamin'i Rafael Bobadilla